pamusoro 5 Busiest Chitima Nzvimbo muEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > pamusoro 5 Busiest Chitima Nzvimbo muEurope
Kufamba kwechitima ndiyo nzira yakajairika ye vaifamba mu Europe. saka, mamwe echitima anonyanya kubatira muzvitima ari muEurope uye dzimwe nguva, munyika.
Kunyangwe kuve wakawandisa panguva dzepamusoro, pamusoro 5 zviteshi zvechitima zvakanyanya muEurope zvakagadzirwa kuti zvipe chero chinhu chaungade parwendo rwako.
Tevedza rwendo rwedu kuenda kuEurope uye tsvaga kuti ndeyipi nzvimbo yechitima inonyanya kubata muEurope. Iwe wave kuda kuona kwaunogona kuteerera Vivaldi uye pane chiteshi chechitima iwe chaunogona kumirira parwizi kuti chako chitima uende kuItari.
1. Gare Du Nord Chitima Chiteshi, Paris
Gare du Nord muParis (Gare izwi rinoreva muchiFrench ndiChitima Chiteshi, Nord muFrance ndeye Maodzanyemba) ndiyo inonyanya kubata chiteshi chechitima muEurope. Kune pedyo 700,000 vafambi vanopfuura nechitima chechitima zuva nezuva. Chiteshi chechitima chiri padyo ne 10fung kuronga muNorth of Paris, saka vazhinji vevaipfuura maParisi. chete 3% yevatyairi vechitima vashanyi vanosvika kubva kuUK kana kuenda kuUK Eurostar chitima.
Chiteshi chechitima chinotyisa kwazvo muEurope chakavakirwa mukati 3 makore, pakati 1861 uye 1864. Iyo muvaki-yakagadzirwa 9 mifananidzo inoshamisa inoshongedza chiteshi chechitima mukati uye 23 zvidhori zvinoshongedza pachiso chechiteshi. Zvidhori zvinomiririra maguta makuru eEurope iyo chitima chinobatanidza neParis.
Chikamu chinoshamisa chechitima chakawedzerwa kaviri pamusoro pemakore uye chinotarisirwa kukwidzirwazve nekuda kwekukura kwehuwandu hwevatasvi uye matareji echitima.
Paris-Nord ndiyo chiteshi chechitima chekufamba kuenda kuNorth France uye kune dzimwe nyika, semuyenzaniso, Jerimani, London, uye Amsterdam. saka, ichi chakabatikana chitima chiteshi ichakupa iwe zvese zvakakosha zvekufamba kwako zororo muFrance. Kune zvitoro, nzvimbo yemashoko evashanyi, kofi zvitoro, uye mabhegi ekuvharira kana iwe uchida kuongorora Paris zvakanaka kune kwemaawa mashoma sitima yako isati yasimuka.
2. Hamburg central station, Jerimani
Kupfuurisa 500,000 vafambi vanopfuura neHamburg Hbf (Hbf ipfupi nzira yekuHauptbahnhof iyo inoshandura kuCentral chiteshi) chiteshi chechitima kuGermany. saka, iyo yechipiri inonyanya kubata chiteshi chechitima muEurope.
Chiteshi chechitima chakavakirwa mukati 4 makore nevagadziri Heinrich Reinhardt naGeorg Subenguth vakaigadzira. Chiteshi chechitima chakavhurwa mukati 1906 uye mukati 1991 nzvimbo yekutenga yakawedzerwa kubhurandi rekuchamhembe, pane maresitorendi, kiosks, mufesi, nenzvimbo dzekushumirwa.
Kana urikuronga ku chitima kufamba kuenda kuGermany, unogona kunakidzwa mimhanzi yemhando yepamusoro. saka, paunenge uchitsvaga zvigadzirwa zveminiti yekupedzisira, kufamba zvakakosha, uye kubata kuruma kudya, unogamuchirwa kwazvo kuti uterere uye unakirwe neVivaldi's zvina Nguva.
3. Zurich HB Central Railway Station, Siwizarendi
Chikamu chikuru chechitima muSwitzerland chiri muZurich. Iyo Zurich HB (HB yakafanana neHbf uye zvinoreva Hauptbahnhof = Central Station) chiteshi chechitima ndechimwe chechitima chinotyisa kwazvo muEurope. Chiteshi chechitima cheSwitzerland chakabatikana chinobatanidza Switzerland nemaguta mhiri kwenyika uye nenyika dzakavakidzana. Pane 13 mapuratifomu uye 2,915 zvitima zvinoenda kuGermany, Itari, Furanzi, uye Austria zuva nezuva. saka, chiteshi chechitima cheZurich ndechimwe chezvitima zvakanyanya kwazvo munyika.
Chimwe chinhu chinoita ichi chiteshi chechitima chakabatikana muEurope ndechekuti pane chaiko hustling & hupenyu hweguta hwakaputika mukati mechiteshi. Semuyenzaniso, zvinoenderana nenguva yako yekufamba, unokwanisa farira misika yeKisimusi and street parades.
Chiteshi chechitoro cheZurich chiri mu Old Town yeZurich. The Sihl rwizi anopfuura nepakati pechiteshi, izvi zvinoreva kuti pane matiraki echitima pamusoro uye pazasi payo.
wo, iyo Zurich chiteshi chechitima chinobatanidza Switzerland neFrance, Jerimani, Itari, Czech Republic, uye Austria.
Zvakafanana nedzimwe nzvimbo dzepasi rese dzezvitima pane yedu runyorwa, pane a mari yekuchinjana hofisi, Hofisi yematikiti, kuchengetwa kwemidziyo, ruzivo rwevashanyi, neWi-Fi internet muZurich chiteshi chechitima. saka, kana iwe wakanganwa kurongedza chimwe chinhu chako zororo muSwitzerland, hapana kunetseka nekuti pachiteshi unogona kuwana zvese.
4. Roma Termini Chitima, Itari
Chiteshi chechitima cheRome chinoratidzira kumusoro kwedu 5 dzinonyanya kubatikana zvitima muEurope rondedzero nekuda kweiyo yakasarudzika yegore nhamba yevanokwira yavanoshanda. Kusvika pa 150 mamirioni vanokwira vanosvika uye vanobva vakabatikana nechitima chiteshi gore rega.
Chiteshi chechitima cheRome chinobatanidza Roma Termini nemamwe maguta muItaly kuburikidza Trenitalia. Pamusoro pe, chiteshi chechitima chinobatanidza Italy nenyika dzakavakidzana kuburikidza 29 mapuratifomu. Semuyenzaniso, kubva kuRoma Termini, unogona kuenda kuGeneva muSwitzerland, Munich kuGermany, uye Vienna muAustria.
Chiteshi chechitima cheRome chine zvese izvo mufambi angangoda kudzidzisa kufamba muEurope kana Italy. saka, paimba yekupinda, iwe uchawana hofisi yekuchinjana yemari, mumaresitorendi, mabasa etekisi, uye zvigadzirwa zvemarata. Chese chinhu chakarongwa uye chakagadzirirwa kuita kuti nzendo dzako dzifambe zvakanaka sezvaunogona.
5. Munich Hauptbahnhof Chitima Chiteshi, Jerimani
Nhasi varipo 32 mapuratifomu mune imwe yenzvimbo dzezvitima dzinotyisa muEurope. Pamusoro pe, kune InterCity uye EuroCity chitima masevhisi kune mazhinji eGermany, uye Italy, Furanzi, Siwizarendi, uye Austria. Kubva Munchen Hauptbahnhof chiteshi chechitima unogona kuenda kuBerlin, muFrankfurt, Vienna kuGermany kana tora chitima kuenda kuVenice uye Roma kuItari, Paris, uye Zurich.
Around 127 mamirioni vafambi vanoshanyira chiteshi chechitima cheMunich gore rega. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
Zvakafanana nezvimwe zviteshi zvechitima zvataurwa pamusoro, chiteshi chechitima cheMunich chinopa zvivakwa zvakawanda uye masevhisi kune vafambi. Semuyenzaniso, unogona kuwana zvitoro zvekudya, zvitoro zvezvipo, uye kunyange mwana & museum wevechidiki muchitima chechitima.
Kunze kwechiteshi, iwe uchawana iyo U-Bahn yepasi pevhu metro, mabasa etekisi, uye tram mitsara iyo inokuendesa iwe kupi kuMunich.
Kunyangwe iwe uchitsvaga chitima chenyika kana chenyika kuti ufambe muEurope, kuraira tikiti rako ne Save A Train. Isu tichafara kukubatsira iwe kuwana dzakanakisa tikiti sarudzo dzinowanikwa pamitengo yakanakisa.
Unoda embed yedu Blog romukova “pamusoro 5 Busiest Chitima Nzvimbo muEurope” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbusiest-train-stations-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
BusiestTrainStations Chiteshi chechitima traintravelaustria chitima navi France traintravelgermany